धनगढी- जब मान्छेको सोच र जोश सिर्जनशिल हुन्छ, तब उसले अनेकन असफलतालाई मात दिँदै नयाँ सिर्जना दिन थाल्छ । र नयाँ–नयाँ खोज र आविष्कारको जन्म हुन्छ ।
त्यही सिर्जनशिल सोचलाई 'जोश'मा परिणत गरेका धनगढी उपमहानगरपालिका–५ तारानगरका १९ वर्षीय तनमय चौधरी कलिलै उमेरदेखि नै एकपछि अर्को नयाँ–नयाँ वैज्ञानिक आविष्कार सिर्जना गर्दै आएका छन् ।
आफ्नो बाल्यावस्था सुनाउँदै तनमयले भने, ‘कक्षा ६ मा पढ्थें । खेलौनाका रुपमा हेलिकप्टर किनेको थिए । खेल्ने क्रममा त्यसको पार्टपूर्जा झिकेर ड्रोन बनाएर उडाएँ । घरमा पुरानो साइकल थियो, त्यसको पार्टपूर्जालाई नयाँ रुपमा ढाल्दै ब्याट्रीबाट चल्ने बनाएँ । खेल्ने क्रममै रोबोट पनि बनाएको थिए ।’
तनमयको आविष्कारको यात्रा रफ्तारमा गुडिरहेको छ । उनी हालसम्म २० भन्दा बढी नयाँ–नयाँ यन्त्र उपकरणको सिर्जना गरिसकेको बताउँछन् । विज्ञानप्रतिको रूचीले उनलाई मेकानिकल इञ्जिनीयरिङतर्फ डोहोर्‍याउँदै लगेको छ ।
धनगढीस्थित एक्सिस विद्या आश्रममा कक्षा ९ मा पढ्दै गर्दा उनले ९ महिना लगाएर ‘इजी कार्ट’ नामाकरण गरिएको ३ पाँग्रे मोटर गाडी सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा उनलाई सुरुवाती आविष्कारका यन्त्रमा भन्दा बढी सफलता मिलेको थियो ।
पेट्रोल इन्जिन जडान गरिएको इजी कार्टको ७ जना वयस्क मानिस बोक्ने क्षमता रहेको उनी बताउँछन् । प्रति लिटर इन्धनबाट ५५/६० किलो मिटर गुड्न सक्ने गति क्षमता रहेको इजी कार्टलाई मोडिफाई (नयाँ रूप) गरेर दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने विभिन्न यन्त्र उपकरणका साथै सुरक्षा निकायको लागि प्रयोग हुने बलियो र सुरक्षित यन्त्र बनाउँन सकिने उनको ठम्याइ छ ।
पछि उनले सो इजी कार्ट काठमाडौंस्थित पुल्चोक इन्जिनीयरिङ कलेजमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदर्शन पनि गरे । जहाँ निकै वाहवाही मिलेको र आफुलाई निकै हौसला मिलेको तनमय सुनाउँछन् ।
अरुको नक्कल होइन, कसरी नयाँ र मौलिक काम गर्न सकिन्छ ? त्यसैमा उनी तल्लीन छन् । उनले वायुमण्डल हुने विभिन्न ग्यास मापन गर्ने यन्त्र पनि तयार पारेका छन् ।
खासमा वायुमण्डलमा अक्सिजनका अलावा विभिन्न हानिकारक ग्यासको मात्रा कति छ ? सो वायुमण्डलमा बढ्दै गएको हानिकारक ग्यासको मात्रा नियन्त्रण गर्न कुन ठाउँमा कति वटा विरुवा रोप्नुपर्छ ? भन्ने सूचक मापन गर्न आफै प्रोग्रामिङ गरेर यन्त्र तयार गरेको तनमय बताउँछन् । तर त्यसको नाम भने दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
बेकामे हुने बित्तिकै तनमयको तनमन वैज्ञानिक आविष्कारमा केन्द्रीत हुन्छ । घरमै सानो वर्कसप स्थापना गरेका उनले नयाँ–नयाँ परिष्कृत यन्त्र उपकरण बनाउँदै आएका छन् ।
सामान ओसार्नको लागि ड्रोन भन्दा परिष्कृत रुपको होबी वीङ बनाएको बताउँदै उनी भन्छन्–‘मैले बनाएको कुनै पनि उपकरण कसैको नक्कल छैन । नयाँ छन् । दैनिक जीवनमा उपभोग गर्न मिल्ने यन्त्र उपकरण छन् ।’
उनी हालै सानो आकार दिएर जेट विमानको इन्जिन तयार गरेका छन् । डेढ वर्षको अथक प्रयासपछि सो इन्जिन तयार पारेको बताउँदै उनले अझै पनि धेरै सुधार गर्न बाँकी रहेको सुनाए ।
‘जेट इन्जिन लिक्वीड प्रोपेन ग्यास र अक्सिजनको कम्बिनेसन (समिश्रण) बाट चल्छ । सानो आकारको छ । तर त्यसको ग्यास फाल्ने ठाउँमा कति र कुन साइजमा प्वाल पार्ने कुरामा एकिन गर्न नसक्दा सफल हुन सकेको छैन ।’ जेट इन्जिन निर्माणमा हालसम्म ४० हजारसम्म खर्च गरिसकेको उनी बताउँछन् ।
तालीम पनि दिन्छन् तनमय
उनी आफु जस्तै विज्ञान आविष्कार तथा मेकानिकल इन्जिनीरिङमा रुची भएका विद्यार्थीहरुलाई तालिम समेत दिदै आएका छन् ।
रोबोटिकस् एसोसिएसन अफ नेपाल फारवेष्ट नामक संस्था स्थापना गरी ४ महिनायता टेक्नोलोजीवारे तालिम दिदै आएको तनमय बताउँछन् ।
‘टेक्नोलोजीवारे विद्यार्थीहरुलाई सिकाउँने काम पनि गर्दै आएका छौ । ती विद्यार्थीहरुले सफलता समेत हासिल गरेका छन्’, संस्थाको संयोजक समेत रहेका तनमयले आफ्नो सफलता साट्दै भने–‘यन्त्र भन्ने संस्थाले काठमाडौंमा ७ देशको सहभागितामा इन्टरनेश्नल इन्भेन्ट अन्तरगत रोबोट फाइटिङ प्रतियोगिता राखेको थियो । जसको इन्ट्री फि मात्रै २० हजार थियो । जहाँ हामीले तालिम दिएको सरस्वती मावि गेटा, कैलालीमा कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु बिजेता भएर फर्किए । निकै खुशी लाग्यो ।’
तनमयको रोलमोडल मिचिको काकु !
कुनै पनि व्यक्तिको सफलताको पछाडी कुनै न कुनै राज लुकेकै हुन्छ । घरपरिवारको पूर्ण सहयोगसँगै तनमयको तनमनलाई अमेरिकन भौतिक शास्त्री एवं वैज्ञानिक मिचिको काकुको अविष्कार तथा सफलताले डोहोर्‍याइरहेको छ । उनै वैज्ञानिकलाई फलो गर्दै आएका उनले आफ्नो रोल मोडल समेत मान्दै आएका छन् ।
बुवा देवकुमार चौधरी र आमा रविता चौधरीको दोस्रो सन्तानको रुपमा जन्मेका तनमयले कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा विज्ञान संकायमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका छन् । अब उनी मेकानिकल इञ्जिनीयरिङको लागि तयारी गरिरहेको जनाइएको छ ।
सम्भव भए काठमाण्डौंमा मेकानिकल इञ्जिनीयरिङ पढाउने उनको काका चौधरीले बताए । उनको काका विजयले भने–‘यदि, नेपालमा भएन भने उसलाई पढ्नका लागि विदेश पठाएर भए पनि मेकानिकल इञ्जिनीयर बनाउँछौं ।’